← अस्ताए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा
कांग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने षडयन्त्रमा ः नारायणकाजी →
दलगत स्वार्थ त्याग्न मुस्लिम नागरिक समाजको दलहरुलाई आग्रह
काठमाडौ, २१ असार
नेपाल मुस्लिम नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरुलाई दलगत स्वार्थ त्यागेर नयाँ संविधान निर्माणको बातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समाजको पुर्नगठन गरिएको जानकारी दिईएको थियो । पुर्नगठित समाजको नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा मसरुद्दिन अन्सारी, उपाध्यक्षमा डा. अब्दुल कैस सिद्दिकी, सचिवमा अनिन अलि शेख, सह–सचिवमा लियाकत सिद्दिकी र कोषाध्यक्षमा अब्दुल रहमान रहेका छन् । समाजको असार २० गते बसेको बैठकले विधानको धारा ९ (१) का ङ बमोजिम पूर्व उपाध्यक्ष डा. कमरुलहोदा अन्सारी र सचिव जाकिर हुसैन खाँको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको सो अवसरमा जानकारी दिईएको थियो ।